China Yakanaka Hunhu KM NU Series Cylindrical Roller Kubereka NU240ECM Mugadziri uye mutengesi | Kunmei
KM cylindrical roller inotakura, iyo chinhu i100% chrome simbi, mhete dzinofanirwa kuburikidza nekupisa kwekupisa, kuitira kuti kubereka kuve nekona nhema. Inotakura keji ndarira keji uye simbi keji. Iyo inobereka mhando ndeye P6, P5. Kutarisira kubatana newe.
Cylindrical roller mabheyari akapatsanurwa, ari nyore kukwira uye kudonhedza, inoratidzira yakanyanya kusarudzika kunyanya kana ichishandiswa pamabhegi inoda kupindirana kwakaringana pakati pemaringi emukati nekunze ne shaft nedzimba. Cylindrical chinotenderera inobereka inosangana neyekudzokorora mutsara pakati peanotenderera uye iyo nzira, inova yekubvisa yekumusoro kusagadzikana. Tichienzanisa nebhora mabheyari ane akafanana muganho kukura, cylindrical chinotenderera mabheyaringi vane hombe TOUR kutakura vanokwanisa. Mune chimiro, iyi mhando yekutakura inonyanya kukodzera kumhanya kutenderera.
Iwo mabheyaringi anogona kusangana nematambudziko ekushandisa anotarisana neinorema radial mitoro uye yakakwira kumhanya. Kugara axial kusuduruka (kunze kwemabheyaringi ane flanges pane ese emukati uye ekunze mhete), ivo vanopa kukwirira kuomarara, kudzika kukakavara uye hupenyu hwakareba hupenyu.
Cylindrical roller mabheyari anowanikwawo mune yakasimbiswa kana kutsemuka dhizaini. Mumabhegi akasimbiswa, iwo anotenderera anodzivirirwa kubva kune zvinosvibisa, mvura uye guruva, nepo ichipa girisi yekuchengetedza uye kusasvibisa kusvibiswa. Izvi zvinopa yakaderera kupesana uye hwakareba hupenyu hwebasa Kupatsanura mabheyari kunoitirwa kuitisa marongero ayo anonetsa kuwana, senge crank shafts, uko kwavanorerutsa kugadzirisa uye kutsiva.
Kana iyo yekunze dhayamita isingapfuure (inosanganisira) 400mm, solid ndarira keji kana simbi yekudhinda keji inogamuchirwa kune imwechete mutsara cylindrical roller inobereka. Kana iyo yekunze dhayamita inopfuura 400mm, ndarira keji uye pini-mhando keji inogamuchirwa kwemana mutsara cylindrical roller inotakura.
Chigadzirwa zita cylindrical chinotenderera inobereka
Maumbirwo chinotenderera chinotakura
Type NU NNU NF zvichingodaro
Mashoko Chrome simbi,
Nemazvo P5 P6
Zvimiro Yakakwira chaiyo, Yakaderera mutengo, yakanaka mhando
Structural uye Zvimiro
Mujaho wemujaho uye wekuumburuka muviri weye cylindrical roller inotakura ine maumbirwo ejometri. Mushure mekugadziriswa dhizaini, iyo inokwana kugona iri kumusoro. Iyo nyowani dhizaini dhizaini yekupedzisira kumeso uye iyo yekupedzisira kumeso kumeso kwete chete inovandudza iyo inobereka axial inobata kugona, asi zvakare inovandudza iyo lubrication mamiriro eiyo roller kumagumo kumeso uye nzvimbo yekubatana yeiyo roller yekupedzisira kumeso uye iyo roller yekupedzisira kumeso, uye inovandudza kuita kwekutakura.
● Mutoro wepamusoro wekutakura
● Kuomarara kwakanyanya
● Kukakavadzana kwakaderera
● Gara axial kusuduruka
Kunze kwemabheyaringi ane flanges pane ese emukati uye ekunze mhete.
● Dhizaini yakavhurika
Pamwe pamwe neiyo roller end dhizaini uye pamusoro pekupedzisa, kusimudzira mafuta ekugadzira mafirimu zvichikonzera kushomeka kwakadzika uye yakakwira axial mutoro kutakura kugona.
Iyo logarithmic roller profile inoderedza kumanikidza kushushikana pane roller / nzira yemugwagwa kusangana uye kunzwisisika kune zvisirizvo uye shaft kutsauka.
● Kuvandudzwa kwekuvimbika kwekushanda
Iyo yekumusoro yekupedzisa pane yekubata inoonekwa yeairo rollers uye mijaho inotsigira kuumbwa kwehydrodynamic girisi firimu.
● Inoparadzaniswa uye inochinjika
Izvo zvinopatsanurwa zvikamu zveXRL cylindrical roller mabheyari anochinjika. Izvi zvinofambisa kusimudzira uye kubvisa, pamwe nekuongorora kwekuchengetedza.
Pashure: Zvekurima Kubereka UCP Series Pillow Block Kubereka
Zvadaro: Yakakwira Precision 32000 Series Mota Kutakura Taper Roller Kubereka